Sokajy: mihinana sy misotro
Torohevitra azo ampiharina amin'ny fihinanana sakafo
Ny fisakafoanana marobe izay mampanantena ny tsirairay hampihena ny lanjany haingana sy amin'ny fomba mahomby mba hahatratrarana ilay tarehimarika na lanjany dia mety hiteraka fikorontanana.
Torohevitra mahomby amin'ny sakafo
Efa nanandrana sakafo ve ianao taloha, saingy nahantra kosa ny fahombiazana? Moa ve nahatratra anao hatrany hatrany ny vokatra yo-yo?
Afaka mahita antony arivo tsy hanombohana sakafo akory ve ianao? Na sarotra ny fomba fahandro, tsy dia misy karazany ny sakafo, na mandany fotoana ny fandrahoana. Ny fifehezana dia latsaka amoron-dalana hatrany am-piandohana.
Ny momba ny sakafo rehetra - © Dan Race / Adobe Stock
Mba hahombiazan'ny sakafo dia tsy maintsy resy lahatra ny amin'ny fahombiazany. Tokony ho mora ny mampiditra azy amin'ny fiainana andavanandro ka tsy hainao ny mitazona azy io hatrany.
Ny fifehezan-tena dia mampanantena fahombiazana
Tsy mora ny mandà ny mofomamy matsiro rehefa misakafo. Raha tokony ho ranona be kaloria dia tsy maintsy mifindra amin'ny rano ianao. Rehefa miantsena dia sarotra ny maka antoka fa novidiana ny sakafo tsy misy kaloria firy.
Toe-javatra maro amin'ny fiainana andavanandro no maka fanahy anao hanina tsindraindray. Ary tsy ratsy mihintsy izany. Raha te hihinana mofomamy iray ianao amin'ny tolakandro dia mihinana salady iray fotsiny amin'ny hariva fa tsy ilay mofo roa.
Mety hahasoa koa anefa ny fanelingelenana. Vonoy fotsiny ny fahitalavitra amin'ny hariva dia mandehandeha mitsangatsangana. Angamba avelao any aoriana ny fiaranao sy ny bisikiletanao miasa. Ny tsara indrindra dia ny sakafo mora harahina nefa tsy misy fiovana lehibe.
Torohevitra haingana sy mora hampandeha ny lanja very
Mampiasà takelaka kely kokoa
Mazava ho azy, ny sakafo lanina amin'ny sakafo tsy tokony ho be loatra. Makà takelaka kely kokoa fotsiny dia ho lehibe kokoa ny sakafonao. „Praktische Diät Tipps zum Abnehmen“ Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 16. Jolay 2021 5. September 2021 Sokajy mihinana sy misotroKeywords mihena, sakafo, Torohevitra momba ny sakafo, Kaloria, mahatsiaro kaloria, nihena kaloria, lasa chancreLeave a Comment toro-hevitra momba ny sakafo ara-dalàna momba ny fihenan-danja
Ny mofo dia iray amin'ireo sakafon-tsakitsakitsika ary lany isan'andro. Fantatry ny rehetra ny fofona mahafinaritra an'ny mofo vao namboarina ary fantany ny tsirony rehefa vao avy tao anaty lafaoro. Ka inona no manohitra ny fanaovanao mofo?
Andrahoy mofo miaraka amin'ny ankizy
Indrindra miaraka amin'ny ankizy, dia manolotra fotoana tsara ahafantarana ny ankizy kely amin'ny karazan-mofo, ny akora ao aminy ary ny fitaomana amin'ny fahasalamantsika manoloana ny fihinanana sakafo mahasalama.
Fianakaviana manan-janaka roa no miara-miala voly amin'ny mofo ao an-dakozia
Ho fanampin'izany, mamporisika azy ireo hankafy ny fanaovana izany ny tenany ary miaraka amin'izay dia mahazo ny firesahana momba ny famokarana sakafo, izay tsy dia raisina intsony ankehitriny.
Fototra momba ny fanaovana mofo
Na dia misy karazana mofo tsy tambo isaina aza dia samy manana ny firafitry ny akora fototra iankinan'izy ireo avokoa:
- masirasira na masirasira
Ny akora ilaina indrindra amin'ny mofo mahomby dia ny fotoana, satria izany no ilain'ny koba mba hahafahany misondrotra ampy ary hahatratrarana vokatra azo avy amin'ny fanaovan-mofo. "Miara-manendasa mofo" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 16. Jolay 2021 5. September 2021 Sokajy mihinana sy misotroKeywords manendasa miaraka amin'ny ankizy, mofo, fanaova mofo, manendasa miarakaLeave a Comment hiara-manendy mofo
Ny fahavaratra dia hita amin'ny voninahiny rehetra? Azonao atao tsara ny mamoaka ny grill avy ao amin'ilay helo ary manandrana ny fomba fahandro fahavaratra tsara indrindra ary mankafy azy ireo eo amin'ny natiora. Manontany tena ny olona sasany raha misy zava-baovao azo tsapaina rehefa manendy. Rehefa dinihina tokoa, dia tsy voatery ho lovia hena foana.
Vaovao avy ao anaty grill - Fomba fahandro fahavaratra vao azo
Saika azo alamina ny zava-drehetra - fa iza kosa no nanandrana izany taloha? Ka ahoana ny fanandramana mandrotsaka legioma samihafa izay mbola tsy nidina an-tsompitra, koa ho lovia ho an'ny hena?
Tsy voatery ho hena foana rehefa mitono - © tunedin / Adobe Stock
Legioma isan-karazany azo masaka amin'ny hena. Tsy ny legioma namboarina toy ny katsaka ihany, fa ny asparagus, karaoty, atody ary holatra ihany koa. Ny zucchini dia azo nofonosina alim-pito alimo toy ny legioma hafa.
Ny legioma dia matsiro indrindra rehefa soloina schnitzel alohan'ny fanjifana. Tsia, matotra ... raha voahosotra alohan'ny fanamasinana. Tsy misy fetrany ny fanatasy.
Ny menaka voadio toy ny menaka manitra na tanamasoandro dia tena ao anaty marinade. Ny ambiny dia azo ampiana amin'ny tsiro. Ohatra, dipoavatra mena, dipoavatra mainty, tongolo, tongolo lay ary maro hafa - araka ny itiavanao azy. Raha tsy tianao ny marinade sarotra, dia afaka miborosy legioma fotsiny ianao amin'ny dibera alsan kely sy sira kely. "Mitono hena tsy misy hena | Mihinana zava-pisotro " Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 2. Jolay 2021 5. September 2021 Sokajy mihinana sy misotroKeywords Amboary ny zavokà, Mofomamy tsy misy hena, Grill, grillingLeave a Comment fa tsy mitono hena | Mihinana zava-pisotro